रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलको नियतमाथि छानविन गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ जेष्ठ ८ बुधबार, ०३:०६
रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलको नियतमाथि छानविन गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई
२०७५ फाल्गुन ११ गते प्रकाशित, l ११:३२
सांगठनिक एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सत्तारुढ दलको स्थायी कमिटिले गठन गरेको कार्यदल भंग गरिएपछि विवाद सुरु भएको छ । विधानअनुसार जुन कमिटीले कार्यदल गठन गर्यो त्यसैले भंग गर्ने व्यवस्थाविपरित सचिवालयले भंग गरेको छ । यस विषयमा कार्यदलको केही सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका छन् । त्यसमध्येका एक सदस्य योगेश भट्टराईसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई सदस्य रहेको कार्यदल भंग गरियो । कार्यदल नै निकम्मा सावित भयो हैन ?
नेकपा स्थायी कमिटीले कार्यदल गठन गरेको थियो । निमम्मा नै भयो भनिएको छैन । कार्यदल बनाएर कामको जिम्मा दिइएको थियो । हामीले अध्यक्षद्धयको निर्देशनअनुसार नै काम गरिरहेका थियौँ । तर पछिल्लो समय कार्यदलको काम खासै प्रभावकारी भएन ।
योगेश भट्टराईहरुका कारण कार्यदल भंग गर्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर संयोजक रामबहादुर थापाले आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
त्यस्तो भनेको मैले सुनेको छैन । यदि भनिएको हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । कार्यदलको जवाफदेहिता नेतृत्वले लिनुपर्छ । नौ सदस्यीय कार्यदलम रामबहादुर थापा आफैँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो । हामी त सदस्य मात्रै हो । हामीले त पटक पटक काम अगाडि बढाऔँ भनेका थियौँ । तर पर्याप्त बैठक नै राखिएन । माघको २४ गते पार्टीले स्थायी कमिटीले प्रतिवदेन मागेको छ भनेर बैठक बोलाइयो । तर त्यो बैठकमा कार्यदल भंग गर्ने प्रतिवेदन ल्याइएको रहेछ । त्यो कुरा हामीले मानेनौँ । त्यसपछि कार्यदललाई यथावत राख्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्दा स्थिती चिन्ताजनक देखिएको छ ।
अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा कार्यदललाई काम गर्न नदिने को हो भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्छ । यो विषयमा स्थायी कमिटीमा कुरा राख्छौँ । पार्टी अध्यक्षद्धयलाई पनि भन्छाँै । कार्यदल असफल हुनुमा मैले रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलेको नाम लिन म बाध्य छु । कार्यदलका संयोजक थापा र सचिवालयका महासचिव पौडेलको नाम अप्ठ्यारो मानेरै पनि लिन बाध्य छु । उहाँहरुको अनिच्छा, अकर्मण्यता र उदाशिनताकै कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेको हो । त्यसैले उहाँहरुको मूल्याङ्कन स्थायी कमिटीले गर्नुपर्छ । उहाँहरुको क्रियाकलाप र नियतमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।
थापा र पौडेललाई मात्रै दोष लगाउन मिल्छ ?
उहाँहरुले त कार्यदललाई यो ठाउँमा पुर्याउन चाहनुभएको हो । अयोग्यताले हात उठाइसकेपछि, आत्मसमर्पण गरिसकेकाहरुप्रति अरु धेरै टिप्पणी नगराँै ।
स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल सचिवालयले भंग गर्न मिल्छ ?
पार्टी विधानको धारा ३३ मा पार्टीमा कार्यदल बन्न सक्छ । कार्यदल जुन कमिटिले बनाउँछ कार्यक्षेत्र पनि त्यसैले तोक्छ भनिएको छ । भंग गर्नुपरे पनि गठन गर्ने कमिटिले नै गर्छ भनिएको छ । स्थायी कमिटिले बनाएको कार्यदलबारे उसैले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।
तपाईहरुले अब छुट्टै प्रतिवेदन लैजान खोज्नुभएको हो ?
प्रतिवेदन नै होइन, यस विषयमा हाम्रो धारणा लैजान्छौँ । देशैभरका नेता कार्यकर्तालाई वास्तविक कुरा जानकारी दिनुपर्छ । हामीले एकताका लागि मापदण्ड बनाउन खोजेका थियौँ । यस विषयमा लिखित धारणा दिन्छाँै ।
२०७५ फाल्गुन ११ गते सम्पादित l १२:२२